A Glimpse of My Life: အဓိပတိလမ်းက ခြေရာများ
ရေး - ဝင်းမင်းထွေး
ဆို - ထူးအိမ်သင်
တိမ်တိုက်လို ဝေးလွင့်လို့သွား အားလုံး ပျောက်ကွယ်လေပြီ
ရာသီတြွေခာခြာလည် မှုန်ဝါး အတိတ်က ခြေသံ တိုးတိုးသွား
ပွင့်သစ်စ ရနံ့ဆွတ်ပျံ့ အခုတော့ ပျောက်ပျယ်လွင့်ပါး
ပြောင်းလဲခြင်းများရဲ့ မြစ်ရေတို့ ဘဝကို ဖြတ်ကျော်တာ ကြုံတယ်
ဒဏ္ဍာရီလိုလို ဝေဝေဝါး အတိတ်က ခြေသံ တိုးတိုးသွား
ဒီမှာ တို့နှစ်ယောက်တကယ်ကို ဝေးခဲ့ကြပြီလား
(အို အဓိပတိလမ်းက/မ လည်း အရင်လိုပါလား
အို တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ/တို့ မခိုင်မြဲကြ
အဓိပတိလမ်းထက် လျှောက်ခဲ့ကြ တို့ခြေရာများ
အမြဲတမ်းတွဲသွား မခွဲတမ်းလျှောက်ခဲ့.. အို အချစ်တဲ့လား
ကမ္ဘာတည်အောင် ခြေရာတွေ ချန်နေရစ်မလား
ကြင်နာသူတွေ တကယ်ကို ဝေးခဲ့ပြီတဲ့လား
Footsteps on Adipati Road
Lyrics: Win Min Htwe
Singer: Htoo Eain Thin
These footsteps of the past on Adipati Road
They all have disappeared like clouds drifting away
Many seasons have come and gone... and the sound of these footsteps gradually fades away
Have you and I really parted?
The fragrance of budding flowers have slowly disappeared
We faced the current of changes slowly passed by our lives
Likealegend, it has become unclear… and the sound of these footsteps gradually fades away
(Adipati Road has always been the same
Yet, our love didn’t last
Did you see what has happened to us?
Everything had changed, can you believe it?)
Our footsteps were paved on Adipati Road
We never separated, and always together, was it love?
We thought to leave our footprints so that they’ll last until the end of the Earth
But now what had happened?
Those who were lovers had really parted?
Everything had changed, can you believe it?
အဓိပတိလမ်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖြစ်တိုင်း ဒီ သီချင်းလေးကို အမှတ် ရမိတယ်။ ဒီ သီချင်းလေးကို နားထောင်ရတိုင်းလည်း အဓိပတိလမ်းကို သတိရမိတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရော တခြား တက္ကသိုလ်တွေမှာပါ ဝမ်းနည်းပူဆွေးစရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ မရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီသီချင်းလေးရဲ့ စာသားတွေထဲမှာ စီးဝင်နစ်မြောပြီး၊ သီချင်းရေးဆရာ ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်မိပာတယ်။
"ချစ်ပြီးမှ ကွေကွင်းရတာ ပိုပြီး ကောင်းသလား။ ဒါမှမဟုတ် အဆုံးသတ် မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိနေတဲ့အတွက် မချစ်ခဲ့ကြတာ ပိုပြီး ကောင်းသလား။ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ခံစားရသလဲ။ "
"ဘာလို့ သူတို့တွေ ကွဲကွာခဲ့ကြရတာလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သစ္စာဖောက် ခဲ့လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုမှ ညှိလို့မရတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လူနှစ်ဦး ဖြစ်နေတာ သိလိုက်ရလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မိဘတွေက သဘောမတူတာတို့၊ "သမီး သူ့ကိုယူရင် အမေ သေရပါလိမ့်မယ်" ဆိုပြီး တားလို့ မိဘတွေကို ငဲ့ညာပြီး ဝေးကွာရတာလား။" ဆိုပြီး စဉ်းစားမိသေးတယ်။
ကျွန်မတော့ ဒီသီချင်းကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ အသက်နည်းနည်း ကြီးလာတော့မှ ဒီသီချင်းဟာ Bertie Higgins သီဆိုထားတဲ့ "Casa Blanca" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကော်ပီထားမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီ Casa Blanca ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း သူ့ အနှစ်သာရနဲ့သူ နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အခု ထူးအိမ်သင် ဆိုထားတဲ့ မြန်မာပြန်လေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ဒီ သီချင်းမှာ ကိုထူးအိမ်သင် ရဲ့ အသံ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့လေးကို သဘောကျတယ်။ ငယ်ငယ်က ပထမဆုံး နားထောင်ဖူးခဲ့တာတော့ ဟေမာနေဝင်း သီဆိုထားတဲ့ ဗားရှင်းပါ။ ဟေမာနေဝင်း ရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းများ ဆိုတဲ့ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ စာသားတွေတော့ နည်းနည်း ပိစိလေး ကွဲလွဲတာ မှတ်မိတယ်။
ဥပမာ - "အဓိပတိလမ်းကတော့ အရင်လိုပါလား .. တို့ရဲ့ အချစ်ကတော့ မခိုင်မြဲဲဲဲဲကြ" လို့ ထူးအိမ်သင် ဆိုသွားပေမယ့်၊ ဟေမာနေဝင်း ဆိုတုန်းကတော့ "အဓိပတိလမ်းကတော့ အရင်လိုပါပဲ.. တို့ရဲ့အချစ်ကတော့ မခိုင်မြဲဘူး" လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးလေးတွေ ကွဲသွားတယ်။ အခုလောလောဆယ် အဲ့ဒီ ဟေမာနေဝင်းရဲ့ အယ်လ်ဘမ် မရှိလို့ ကျန်တဲ့ ဘာစာသားတွေ ပြောင်းသလဲ ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။
အခု ကျွန်မ ရှယ်ယာလုပ်ထားတဲ့ ထူးအိမ်သင် သီချင်းကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ တစ်နေ့စာ အလွဲများ ဆိုတဲ့ အခွေကပါ။ ဒီသီချင်းကို ပထမဆုံး ထူးအိမ်သင် စဆိုခဲ့တာက ချစ်ကောင်း၊ ဟယ်ရီလင်း နဲ့ ထူးအိမ်သင် တို့ရဲ့ အိပ်မက်ကုန်သည် (၂၀၀၂ ဝန်းကျင်မှာထွက်ရှိသည်) ဆိုတဲ့ အတွဲခွေထဲမှာ စပါဖူးတယ် လို့ ကိုဖိုးသားကို မေးကြည့်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်များမှ အဓိပတိလမ်းကို ဘယ်လို လျှောက်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ တင်ပြသွားပါဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်။ (Mandalay FM ကို အားကျလို့ပာ :P)
အခ်ိန္ 3/05/2010 10:33:00 AM စာေရးသူ - အရုဏ်ဦး